ALAKAMISY 24 MEY 2018
VINAN’NY FILOHAN’NY REPOBLIKA : “Efa nanana vina izahay fa nahongana ”, hoy ny Amiraly Ratsiraka
Nambaran’ny Filohan’ny Repoblika, omaly, tamin’ny kabary izay nataony fa manana vina momba ny fampandrosoana ny Firenena ny Fanjakana amin’izao fotoana izao ary taonan’ ny asa rahateo ity taona 2017 ity, hoy izy. 7 janvier 2017
Mikasika io vinan’ny Fitodram-panjakana io, dia nitondra ny heviny ny Filoham-pirenena teo aloha ny Amiraly Didier Ratsiraka. Nandiso izany ny Amiraly nandritra ny tafa fohy natao taminy, omaly.
Nilaza izy fa “fony izy teo amin’ny fitondrana dia efa nanana vina maro noentina nampandrosoana ny Firenena izahay fa naongana ary tsy nitohy intsony izany vinanay izany ary tsy notohizan’ny mpandimby anay ihany koa”, hoy hatrany izy.
Naka ohatra roa tamin’izany ny Amiraly, ka anisan’izany ny momba ny famatsiana herinaratra. Nahavita trano 35 tafo tany Sahanivotry izahay tamin’izany, mba hamokatra herinaratra na angovo azo havaozina. Nilaza koa izy fa tamin’ny fitondrany ihany koa no nahatratra 116 megawatt ny herinaratra vokarin’Andekaleka, izay nahavita namatsy jiro tanàna maro mihitsy. Narodana izahay, ka tsy nitohy ny asanay. Ny solika anodinana milina ahazoana herinaratra dia efa vinanay hatramin’izay izany fa tsy nitohy intsony. Koa nahoana ny mpitondra ankehitriny no sahy nanambara fa izy no nanana vina entina hampandrosoana ny Firenena ?”
Mikasika ny tsy fahampian’ny sakafo any atsimo na eto an-drenivohitra dia nilaza ny Amiraly Ratsiraka fa vita izany na dia izao dia izao aza, raha toa ka omen’ny Filohan’ny Repoblika fahefana hanao izany izahay. Ny vola hamatsiana izany koa efa azo antoka fa andrasana ny fankatoavana avy aminy, amin’ny maha filoha azy.
Nambarany ihany koa fa mila fifanomezan-tanana ny fanarenana ny orinasa Air Madagascar sy ny jirama ary ny Firenena, ka ndao hiray hina sy hitambatra mba havotana ity Firenena ity.
Manangasanga indray ny fihantsiana ady FAMORIAM-BAHOAKA ATAON’NY ANTOKO HVM (199) 23 mai 2018 Mihamafy hatrany ny hetsika fanairana ho an’ny Hcc FAMPITSAHARANA NY FILOHA AMIN’NY ASANY (177) 23 mai 2018 Misy tetika maloton’ny Hcc sy ny fitondrana ? HETSIKY NY HVM ETSY ANTSONJOMBE (174) 24 mai 2018 « Fandemen-tsaina sy ramatahora atao amin’ireo mpitolona” FAMPIANTSOANA AN’I HERY RASOAMAROMAKA (126) 24 mai 2018 Nariana teny amin’ny « Boulevard de la francophonie » ny fakon’entana BUILDING RAMAROSON (115) 24 mai 2018 Mpanara-dia iray maty, omby zato very, mangina ny depiote TANANAN’IKALAMAVONY (108) 23 mai 2018